Alahady – 19/10/2014 – Tenin’Andriamanitra – Ecar Sainte Anne Anjomakely
Vakiteny voalohany: Bokin’i Izaia Mpaminany 45, 1. 4-6a
Notantanako tamin’ny tanany havanana i Sirosy mba handavo ny firenena rehetra eo anatrehany.
Izao no lazain’ny Tompo, amin’ilay voahosony, amin’i Sirosy, izay notantanako tamin’ny tanany havanana, mba handavo ny firenena rehetra eo anatrehany, sy hamaha ny fehikibon’ireo mpanjaka,ary hamoha ny varavarana eo anoloany, mba tsy ho voasakana tsy hiditra amin’ireny izy: “I Jakôba mpanompoko, sy i Israely voafidiko, no niantsoako anao tamin’ny anaranao; sy nanendreko anao, fony mbola tsy nahalala Ahy ianao. Izaho no Tompo ary tsy misy hafa koa; tsy misy Andriamanitra afa-tsy Izaho. Nampisikina anao Aho, fony ianao mbola tsy nahalala Ahy, mba hahafantaran’ny olona, hatramin’ny fiposahan’ny masoandro ka hatramin’ny filentehany, fa tsy misy na inona na inona afa-tsy Izaho! Izaho no Tompo ary tsy misy hafa.”
Vakiteny faha-2: Taratasy voalohan’i Md Paoly Apôstôly ho an’ny kristianina tany Tesalônika 1Tes 1, 1-5b
Tsaroana ny asan’ny finoanareo sy ny fitiavanareo ary ny fanantenanareo.
Izaho Paoly sy i Silvano ary i Timôte mamangy ny Eglizy any Tesalônìka, izay ao amin’Andriamanitra Ray sy i Jesoa Kristy Tompo: ho aminareo anie ny fahasoavana amam-piadanana.Misaotra an’Andriamanitra mandrakariva noho ny aminareo rehetra izahay, sady manonona anareo amin’ny fivavahanay, ary tsy tapaka ny mahatsiaro eo imason’Andriamanitra Raintsika ny asan’ny finoanareo, sy ny fahafoizan-tenan’ny fitiavanareo, ary ny faharetan’ny fanantenanareo an’i Jesoa Kristy Tompontsika; fa fantatray, ry kristianina havana, malalan’Andriamanitra, fa olom-boafidy ianareo, satria ny fitorianay ny Evanjely tany aminareo dia tsy tamin’ny teny ihany, fa tamin’ny hery koa, sy tamin’ny Fanahy Masina, ary tamin’ny fampiekena tanteraka.
Evanjely nosoratan’i Md Matio 22, 15-21
Aloavy ho an’i Sezara izay an’i Sezara ary ho an’Andriamanitra izay an’ Andriamanitra.
Tamin’izany andro izany, niray tetika ny Farisiana hamandrika an’i Jesoa amin’ny teniny. Dia naniraka ny mpianany niaraka tamin’ny Herôdiana ho any aminy izy ireo nanao hoe: “Ry Mpampianatra ô, fantatray fa marina Ianao, ary mampianatra ny lalan’Andriamanitra araka ny marina, ka tsy mampaninona anao ny olona; satria tsy mizaha tavan’olona Ianao. Koa mba lazao aminay izay hevitrao ny amin’ity: mety va ny mandoa hetra ho an’i Sezara sa tsia?” Fa i Jesoa nahalala ny faharatsiany ka nanao hoe: “Ry mpihatsaravelatsihy, nahoana ianareo no maka fanahy Ahy? Asehoy Ahy ny farantsa kely fandoa amin’ny hetra”. Dia nanasehoany denie iray Izy. Ary hoy i Jesoa taminy: “Sarin’iza, sy anaran’iza ity?” Hoy ireo hoe: “An’i Sezara”. Ka hoy Izy: “Raha izany àry”, dia aloavy ho an’i Sezara izay an’i Sezara, ary ho an’Andriamanitra izay an’Andriamanitra.
Alahady – 14/12/2014 – Tenin’Andriamanitra
Alahady voalohany amin’ny Karemy – 22/02/2015 – Tenin’Andriamanitra
Alahady faha-fito Paka – 17/05/2015 – Tenin’Andriamanitra